साउदी अरबबाट दश महिना मा ९६ शव, कारण के? - NA MediaNA Mediaसाउदी अरबबाट दश महिना मा ९६ शव, कारण के? - NA Media
टिका के.सी - सम्पादक
वैदेशिक रोजगारमा आएका युवामध्ये खाडी मुलुकहरु बाट प्राएजसो दैनिक शव नेपाल भित्रिने क्रममा कुनै कमी आएको छैन। पछिल्लो दश महिनामा साउदी अरब बाट ९६ युवाको शव नेपाल पठाईएको छ, वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाको निधन धेरै हुने देशको दोस्रो नम्बरमा साउदी अरब पर्दछ। त्यस्तै मलेशिया, कतार र अन्य खाडी मुलुकहरु बाट पनि त्यत्तिकै संख्यामा शव हरु दैनिक भित्रिई रहेका हुन्छन।यति ठुलो संख्या मा दिनहुँ जसो नेपाल भित्रिने शवको बाकसले वैदेशिक रोजगारका असरबारे सम्बन्धित निकाय मौन रहे पनि हामी युवा हरु लाई यसको बारेमा सोच्न बाध्य बनाएको छ। आखिर किन यति धेरै संख्यामा हाम्रा युवा विदेशी भूमिमा जीवन गुमाइरहेका छन् ?
पछिल्लो दश महिनामा भएका निधनको कारण हेर्दा सबैभन्दा बढीको (नेचुरल डेथ) कारण निधन भएको पाइएको छ ।जसको मुख्य कारण हृदयाघात लाई मान्न सकिन्छ।यसका कारण ४५ नेपाली युवा हरु ले ज्यान गुमाएका छन। त्यस्तै दोस्रो प्रमुख कारण प्राकृतिक प्रकोप र ट्राफिक दुर्घटना देखिन्छन् जसमा २८ जनाले ज्यान गुमाएका छन । प्राकृतिक प्रकोप वा कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना भवितव्य मात्र हुँदैन। काममा दक्षता नहुँदा कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना बढी हुन्छ। विडम्बना वैदेशिक रोजगारकै भरमा अर्थतन्त्रको नक्सा कोरिरहेको देशले विदेशगमनको यत्रो वर्षमा पनि दक्ष कामदार पठाउन सकिरहेको छैन। यो तथ्यले पुष्टि गर्छ, राज्य वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणका आधारमा अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न जति इच्छुक छ, त्यो रकम पठाउने युवाको जीवनप्रति जिम्मेवार छैन।
युवाहरूको निधनको कारण अदक्ष हुनु मात्र होइन। त्यो त निकै झीनो कारण हो। युवाहरूको मृत्यु हुने कारणको सूचीमा हृदयाघात र आत्महत्या मान्न सकिन्छ । हृदयाघात शारीरिक स्वास्थ्य र आत्महत्या मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिए पनि यी दुवैमा सामाजिक–पारिवारिक सम्बन्ध हुने पुष्टि भइसकेको छ।
हृदयाघातसँग जीवनशैली जोडिन्छ। साथै एक्लोपन, चिन्ता, विषाद, आवेग र तनावले हृदयाघातको सम्भावना बढाउँछ। विदेशी भूमिमा काम गर्न गएका नेपाली युवाको निरन्तर स्वास्थ्य जाँच र काउन्सिलिङको अभाव देखिन्छ। स्वस्थ मनोरञ्जन र सामाजिक घुलनशीलताको अभावले उनीहरूलाई उच्च रक्तचापको रोगी बनाइरहेको छ। काम, आराम र कामको चक्रीय दौडले जीवन आनन्द दिन सकेको छैन।
त्यस्तै आत्महत्या मानसिक अवस्था र चिन्तनसँग जोडिन्छ। आत्महत्या किन भइरहेको छ ? आत्महत्या गर्ने युवाको पारिवारिक अवस्था कस्तो छ ? उनीहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण र ताजगीको वातावरण कस्तो छ ? आदिबारे राज्यले रत्तिभर पनि ध्यान दिइएको पाइँदैन। विदेश जानुअघि औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले गरिएका काउन्सिलिङले समस्याको निदान त के न्यूनीकरण पनि हुँदैन भन्ने पुष्टि हुन के अझै पनि युवाहरूको शव आउने सिलसिला जारी राख्नुपर्छ र ?
आत्महत्या को अर्को कारण पारिवारिक झगडा, बढ्दो शहरिउन्मोख मोह, तडक भडक, देखासिकी, देखावटी पन पर्दछन। श्रीमान विदेश हिडे पछि श्रीमती लाई शहर बस्नु पर्ने, छोरा छोरी लाई महँगो स्कुलमा पढाउनु पर्ने साथै शहरी हाउभाउ अनुसारको लवाई, खवाई लाई थेग्न नसकेर कतिपयले आत्महत्या गर्ने सम्मको निर्णय लिन बाध्य भएको पाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारको असरबारे निकै कम मात्र अध्ययन भएका छन्। भएका अध्ययनबाट आएका निचोडलाई पनि सम्बन्धित पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन। वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा पारिवारिक मनमुटाव, चर्को ऋण, श्रमसम्झौताअनुसार काम नहुने, तलब सेवासुविधा नपाउनेजस्ता समस्या सामना गर्न बाध्य छन्। यी सामाजिक र व्यवस्थापकीय समस्या हुन्। विडम्बना राज्यले यति ठूलो समस्यालाई वास्तै गरेको छैन।
वैदेशिक रोजगारमा आएका अधिकांश युवा आत्मसम्मानको अभावमा छन्। लामो समयसम्म विदेशमा रहँदा एकातर्फ उनीहरूको सामाजिक उपस्थिति कमजोर भएको छ भने अर्कोतर्फ विदेशी भूमिमा ती हेपिएका छन्। मानिस भएर जन्मिएपछि आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु मानव अधिकार हो। तर राज्यको अर्थतन्त्रको मूल खाँबो भएर आर्थिक देन गरिरहँदा पनि सधैंभरि अपमानित, अपहेलित भएर बाँच्नुपर्ने विवशतालाई राज्यले समाधान खोजिदिनुपर्दैन ?
लाहुरे संस्कृतिबाट हुर्किएको नेपाली समाजका युवाहरू खाडी लाहुरे हुँदै अहिले विश्व बजारका सस्ता श्रमिक बनेका छन्। विदेशगमनसँगै दिनहुँ आउने तीन युवाको शव भयानक तस्बिर हो। वैदेशिक रोजगारले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको ठूलो रिक्ततालाई त तीस, चालीस वर्षमा पूर्ति गरौंला। तर यसले निम्त्याएको सामाजिक–सांस्कृतिक रिक्ततालाई कसरी पुर्ने ? सोच्न ढिलाइ भइसकेको छ।
Gallery image with caption: साउदी अरबमा सामाजिक संघसंस्थाको गतिबिधि अस्ताउदो- के भन्छन सामाजिक अभियन्ता?
Gallery image with caption: कोरोना भाईरसको बड्दो आतंक- संयमित बनौं, सुरक्षित बनौं।